China 14.76 ″ - 23.23 ″ Barrel Mwepu Bipods Long Manufacturers and Suppliers | Chenxi
EBUPU N'FREELỌ AH B N ’BLỌ ỌH BR B ỌH BRUS USLỌ ỌH BRUS
Ingdị Egwuregwu Sporting
Akpa ugbo ala ugbo elu
Untingchụ nta égbè
Akuko Na-ahụ Maka Ngwá Agha
Ingdị mgbanaka Sporting
1 Inch Ma ọ bụ 25.4mm Steel Mgbaaka
30mm Steel Mgbaaka
34/35 / 36mm Mgbaaka Nchara
30mm Aluminium Mgbaaka
Ngwurugwu Ngwunye Ngwunye
Ingdị Ugwu Sporting / Ngwa
Otu Ibe Nchara
Otu Ibe Picatinny Rail Steel Base
Otu Ibe Picainny Rail Aluminium Isi
Uhie & Green Dot
14.76 ″ - 23.23 ″ Barrel Mwepu Bipods Long
Nkọwa: Foldable alum. Mwepu Bipod Mount
Dabara: 11mm na 19mm Gbọmị nke
Ihe: T6-6061 Alum.
Ogologo :kwụ: 380mm-610mm / 14,96 ”-24”
Center Elu: 375mm-590mm / 14.8-23.2 ”
Nodị No: BP-39XL
Imecha: Matte Black
Chenxi N'èzí Products, Corp., E guzobere Afọ 1999 ma ọ dị na Ningbo, China. N'ime afọ 20 gara aga, Ningbo Chenxi gbalịsiri ike ịnye ndị ahịa ya ngwaahịa dị oke nkenke, dị ka egbe égbè, binoculars, scope scopes, mgbanaka égbè, ụzọ mgbochi, nhicha nhicha, ngwa ngwa nhicha, na ngwa ndị ọzọ dị elu. akụrụngwa na ngwa egwuregwu. Site na-arụ ọrụ kpọmkwem na chiri anya na oversea ahịa na àgwà na-emepụta na China, Ningbo Chenxi bụ ike innovate & ịzụlite ọ bụla ngwaahịa metụtara dabeere na ahịa 'obere echiche ma ọ bụ draft osise na a ọma-achịkwa àgwà na ezi uche & asọmpi ahịa.
All Chenxi ịchụ nta / agbapụ ngwaahịa na-kpọkọtara site n'elu notch ọkachamara. Iji nwetakwuo mkpuchi na ngwaahịa niile kachasị mma, ngwaahịa ndị a, dị ka akwara egbe, mgbanaka akụrụngwa, ihe mgbochi, esp… bụ ụlọ nyocha ma ọ bụ ubi nke otu ndị ọkaibe ma ọ bụ ndị na-agba ụta nwere nnukwu nkà, nke ọ bụla nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ. Team Chenxi nwere ndị agha lara ezumike nká na ndị mmanye iwu, ndị na-egbe egbe, ndị ọrụ igwe, na ndị ji aka mgba. Guysmụ nwoke a nwere ahụmịhe bara ụba n'ịchụ nta / agbapụ na ule.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ahịa anyị dị oké ọnụ ahịa, Chenxi gosipụtara ngwaahịa anyị dị mma n'ọtụtụ ahịa nwere akara CCOP ahaziri iche, dị ka Japan, Korea, South East Asia, New Zealand, Australia, South Africa, Brazil, Argentina, Chile, United States, Canada na UK & European Union. Anyị kwenyesiri ike na ngwaahịa anyị nwere ike ịbanye n'ọtụtụ ahịa ma nweta nkwanye ùgwù na mbak n'ụwa niile.
Daalụ maka mmasị na Chenxi Outdoor Products, anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju na afọ ojuju na ngwaahịa anyị.
Ezi uche & Mpi Ahịa
VIP Mgbe-ahịa Service
Chenxi BP-39XL Mwepu Bipodbụ bipod na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide nke na-enye gị nhọrọ ntinye abụọ, ntinye ngwa ngwa, ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na ndụ ogologo ndụ. Chenxi BP-39XL MwepuBipod ụkwụ nwere ike idozi ya nwere nsogbu maka ọtụtụ ọnọdụ ndọtị, yana inwe nkwado ọzọ site na wiil mkpịsị aka mkpọchi. Mkpọchi mkpọchi ngwa ngwa na-ahapụ gị itinye ngwa ngwa ma ọ bụ wepu bipod égbè, na ngwa ntinye abụọ ga-ahapụ gị ka ị gbakwunye ya na gbọmgbọm site na 11mm ruo 19mm na dayameta. Chenxi BP-39XL Clamp Bipod nwere ụkwụ ogologo nwere ike ịnye gị 14.8 ″ ruo 23.2 ″ nke nhichapụ, iji kwado ala na ụdị agbapụ gị. Akụkụ ndị ọzọ dị ịrịba ama gụnyere Ogwe nkwado abụọ maka ike agbakwunye agbakwunyere. Chenxi BP-39XL Mbadamba Bipod nwere nnukwu ọrụ rọba rọba iji nye njide siri ike n'akụkụ ọ bụla.
Na ojiji maka ala ma ọ bụ elu ọ bụla, Chenxi BP-39XL Clamp Bipod gụnyere mpịachi ogwe aka ya na mpụga mmiri-erughị ala akara, na-abụghị ileghara roba roba ụkwụ mpe mpe akwa. Ndị a Bipods nke Chenxi Outdoor Products rụpụtara nwere mmiri na-ebu mmiri na-ebufe ngwa ngwa site na 14.8 "ruo 23.2" iji kwekọọ na mmasị gị. Emere nke ike anodized alloy alloy, nke a bụ oke dị oke mkpa, nke siri ike ma na-agbanwe agbanwe maka mkpa gị. Ngwaọrụ a anaghị egbochi mmasị gị. Mgbe ị na-ebu égbè gị na èbè ma ọ bụ ọbụna gbaapụ aka, bipod agaghị egbochi.
Ndị a Bipods site na Chenxi N'èzí Ngwaahịa na-ewu site na nnukwu ike anodized aluminum alloy na akụkụ nrụgide wuru site na mmiri mmiri. Chenxi BP-39XL Mwepu Bipod bụ ụzọ dị iche iche ma sie ike iji mee ka egbe gị dịkwuo mma maka oke na n'ọhịa. Chenxi BP-39XL clamp Bipod na - agwakọta sistemụ ngwangwa maka ịchekwa nha ọ bụla site na 11mm ruo 19mm yana atụmatụ ndị ọzọ pụtara ìhè ị bịara ịtụ anya site na Sistemụ mmiri pụrụ iche pụrụ iche dị obere ma dịkwa jụụ, na ụkwụ pụrụ iche. ukpụhọde usoro anapụta ngwa ngwa na obi iru ala, ọ dịghị-wobble elu n'ọnọdu. Ihe owuwu aluminom na-eme ka mmiri na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide na-eme ka bipod zuru oke maka ojiji na nso na n'ọhịa.
Ịbịaru → Blanking → Lathe igwe CNC machining holes Drilling oghere → Threading → Deburring → Polishing → Anodization → Mgbakọ → Nnyocha nyocha → ingchịkọta
Usoro nhazi ọ bụla nwere mmemme njikwa mma pụrụ iche
100% nkenke CNC arụpụtara site na nnukwu ike T6-6061 Air-craft Grand Alum
Inogide nwa Anodization, Ⅱdị finish matte n'isi
Elu àgwà Carbon Steel Components
Unique Design maka kpọmkwem arịọnụ na 11mm ka 19mm size gbọmgbọm
Ndenye Iweghachite Button & Posi-mkpọchi Wheel
Kwụ Gbatịrị agbatị na Mgbapụta Akwụ
Obere, S, M, L & XL dị
Ji nganga Mere na China
• Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe
• Central / South America
1 setịpụ Bipod
Ebute Oge: 15- 75 ụbọchị
Nkwakọ ngwaahịa Dimension: 10 × 43,7 × 7,8 cm
Net nha: 452 g
Nnukwu ibu: 520 g
Akụkụ kwa Nkebi: N / A
Nkeji site na Mbupu Mbupu: 20 PC
Gross katọn arọ: 11.5 kgs
Akụkụ Carton ： 41x35x41 cm
Mentkwụ Metgwọ Method: Advance TT, T / T, Western Union, PayPal & Cash
Nzipu nzipu: n'ime 30-75 ụbọchị mgbe ikwado ka & Down mentkwụ mentgwọ
Isi Uru Asọmpi
N'ime afọ 20 nke n'ichepụta na exporting ahụmahụ
N'ime ndị na-emepụta ngwaahịa ụlọ na ndị injinia ngwaahịa
Nabata obere iwu ma nwalee ule
Ezi uche dị mma na ịdị elu kachasị elu maka ndị ahịa anyị niile
Tụkwasịnụ na ụdị ndị kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ
Ngwunye ngwongwo siri ike maka ikike kachasị mmepụta
Nke gara aga: ART-WIN301H
Osote: 10.83 ″ -14.37 ″ Barrel Mwepu Bipod
Chụ nta Bipod
Bipods na-achụ nta
6.3-7.87 bipods eji eme ihe na QD
8.27-13 Bipods Tactical na lever QD
6.3-7.68 Bipods Tactical na mmiri esemokwu co ...
6.69 ″ -8.3 ″ Barrel Mwepu Bipod
Nrụrụ Ọrụ Dị arọ Tipical Bipod na picatinny ugwu
Adreesị: 130lọ 1302,13 / FL., Xingye Industrial Blod, 901 Baizhang East